Mgbasa Mgbasa Mgbasa Mgbasa Agbanye Agbanye Mgbasa Ozi | Martech Zone
Jay Baer bụ otu n'ime ndị na-ekwu okwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na ndị edemede m na-ege ntị. N’oge na-adịbeghị anya, ọ dere ọmarịcha akwụkwọ ozi na ozi ederede nke na-enye nnukwu ntụnyere nke ndị na - eme ihe ike na ndị na - akwado akara.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ihe dị mkpa n'ọtụtụ mgbasa ozi mmekọrịta yana mmemme mmekọrịta ọhaneze ọgbara ọhụrụ. Ma ha anaghị enwekarị nsogbu ịkwọ ụgbọala karịrị akarị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Edere m akwụkwọ banyere ihe kpatara nke a, akpọrọ Ihe kpatara ịchụpụ ndị na-eme ka ndị mmadụ nwee ọnlaịnụ na etu esi edozi ya. Ihe kachasị mkpa bụ na anyị na-agbagha ndị na-ege ntị na mmetụta. Inwe ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Twitter anaghị enye gị ikike ịme ihe, ọ na-enye gị ike ịme ka ị mata ihe.
Ederede "Ihe" bụ ndị ama ama mana ọ bụghị eziokwu. N'ụzọ dị mma, ndị na-ere ahịa ekwesịghị ịhọrọ n'etiti itinye ego na otu atụmatụ ma ọ bụ nke ọzọ. Nke a bụ otu n'ime atụmatụ ndị ahụ. Nke mbụ, ihe akaebe dị na nloghachi na ntinye ego. Nwere ike ịchọpụta na mmemme mgbatị mmetụ bụ ụzọ dị ọnụ ala iji na-adọrọ uche gaa na akara gị na ntụgharị ndị na-esochi Ọ bụrụ na ị bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ, ị nwere ike ọ gaghị enwe ndị na-akwado gị zuru oke yana ịkwesịrị ịkwalite ndị na-ege gị ntị. Nke abuo, e nwere ezi echiche otutu ìgwè ehi na weebụ. Mmetụta nwere ike ibute ịkwado, ọ gaghị adị otu ma ọ bụ nke ọzọ.
M ga-agba onye ọ bụla ume ka ọ gụọ post ma nyochaa ya infographic. Mmemme nkwado maka mmemme nwere ike ị nweta nsonaazụ dị egwu… lelee Zuberance nwere ike imere gị!
Tags: akwadokwalite mgbasa ozigaa blogger outreachika akwadondị na-akwado akaraKwenye ma gbanweeinfluencerahịa ahịaMgbasa ozindị na-emetụta akara na ndị na-akwado akaraJay Baervesos